Lelee ihu igwe na WeatherDesk n'efu maka obere oge | Esi m mac
Lelee ihu igwe na WeatherDesk n'efu maka obere oge
Otu n'ime ihe ole na ole na-atụ uche m na Macs bụ nyocha ngwa ngwa nke amụma ihu igwe maka awa ole na ole sochirinụ. Ee, nhọrọ a dị ma ọ dị mfe ịkpọtụrụ, site na ebe ngosi. Mana ezigbo nhọrọ ma ọ dịkarịa ala n'echiche m, bụ ajụjụ na-akpaghị aka.
Maka nke a nhọrọ kachasị mma bụ ịnweta ya na desktọọpụ anyị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ka a na-ahụ ya. Taa, anyị maara na n'oge ezumike ekeresimesi, WeatherDesk App, onye ọnụahịa ya bụ € 0,99, ghọrọ n'efu.
WeatherDesk na-eji geolocation nke Mac anyị mara ebe ahụ. Site n'ebe ahụ download a desktọọpụ n'azụ n'ọrụ ngwa, na ebumnuche nke inye nsogbu dị ka o kwere mee, mana ọ dị mfe ịkpọtụrụ. N'otu oge, anyị nwere a obere temometa nke ahụ na-egosi, na mgbakwunye na ọnọdụ okpomọkụ, akara nke ihu igwe dị ugbu a (anyanwụ, igwe ojii, wdg) na obodo anyị nọ na ya. Ma, ọ bụghị anyịnya na ngwa, ọ na-emelite na ụfọdụ assiduity, na ozi site na nso ihu igwe ụgbọ.
Ma na mgbakwunye na ịcha mma ma na-atọ ụtọ n'anya n'ihi ihe oyiyi nke ebe anyị nọ, anyị nwere nhazi dịgasị iche iche. Nke mbụ doro anya: nhọrọ n'etiti ogo Celsius ma ọ bụ Fahrenheit. Nhazi ọzọ bụ igosi ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ malite site na mbido ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya n'oge ụfọdụ, site na ịhọrọ ya. Mana ọzọkwa, na-emegharị na ihuenyo ọ bụla anyị nwere.
N'ikpeazụ, temometa anyị bụ obere narị obere obere ọ bụla na tebụl. A na-ebudata ngwa ahụ na sekọnd ole na ole, ebe ọ bụ na nha ya bụ naanị 7,2 Mb, nke a ga-enwe ekele maka ma ọ bụghị na Mac ga-ejupụta na ngwa ndị na-eri ebe nchekwa na ihe onwunwe. Ana m agba gị ume ịnwale ya n'ihi na ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Lelee ihu igwe na WeatherDesk n'efu maka obere oge
Batrị dị na igbe AirPods na-enyekwa nsogbu
Tim Cook na-ekwu na AirPods abụwo nnukwu egwu na New York Stock Exchange